Qiimaynta Warkii.com Ee Wareega Group-yada Tartanka Champions League 2019/2020 -News and information about Somalia
Home Sports Qiimaynta Warkii.com Ee Wareega Group-yada Tartanka Champions League 2019/2020
Waxa si Rasmi ah shalay loo soo saaray isku aadka wareega Group-yad champions League xilli ciyaareedka 2019/2020 iyada oo ay ka soo bexeen kulamo xiiso leh oo si weyn loo sugayo.
Isku aadka ayaa lagu soo saaray kulamo qiimo badan oo ay isaga hor iman doonaan kooxaha ugu awooda badan yurub halka ay sidoo kale jiraan kulamo ay isaga hor iman doonaan kooxaho fudud oo Group-yada ah.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi qiimaynta Group walba oo ka mid ah Group-yada champions League xilli ciyaareedkan.
Group A: (PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray): Group-kan ayay u jiraan laba kulan oo waaweyn waana kulamada dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo PSG, Marka la eego kooxaha Club Brugge & Galatasaray kuwaas ayaa ku tartami doona u soo bixista Europa League wareegiisa xiga waxana ay labada kooxood doormuhiim ah ka ciyaari karaan in ay labada kooxood ee PSG iyo Real Madrid lumiyaan dhibco wareega Group-yada.
Group B: (Bayern Munich, Tottenham, Olympiacos, Red Star): Isla fikirkaas ayaan ku qiimayn karnaa Group-kan kaas oo ku wada jiraan kooxda Bayern Munich iyo kooxdii gaadhay Finalka tartanka sanadkii hore ee Tottenham kadib markii ay sameeyeen saxiixyo fiican suuqii xagaaga waxa si weyn loo sugayaa in arka sida ay diyaarka ugu yihiin in ay wareegyada dambe ka gaadhaan tartanka sanadkan.
Group C: (Man City, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kyiv, Atalanta): Marka dhan loo eego Group-kan ayaa ah midka ugu fudud wareega Group-yada iyada oo kulanka Ugu adag Noqon karo kulanka Man City la ciyaari doonto Shakhtar laakiin sidoo kale waxa si gaar ah isha loogu hayn doonaa kulanka ay City la ciyaari doonto Atalanta.
Group D: (Juventus, Atletico Madrid, Lokomotiv Moscow, Bayer Leverkusen):Shaki la,aan kulanka dhex mari doona Juventus iyo Atletico Madrid ayaa isha si weyn loogu hayn doonaa kadib kulankii xiisaha lahaa ee dhex maray labada kooxood xilli cadaawada Cristiano u qabo Atletico uu kulanka ka dhigayo mid u qalma in la daawado.
Group E: (Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk): Napoli aya Liverpool ku ahayd koox ku adag xilli ciyaareedkii hore iyada oo Reds goolal ku reebtay Napoli markii kaalinta 2-aad kaga baxday Group-keeda laakiin Kooxda difaacanaysa champons League ayaan shaqo fudud u noqon doonin ka hor tagista kooxda Ancelotti.
Group F: (Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milan, SK Slavia Prague): Waa mid ka mid ah Group-yada ugu adag wareega Group-yada iyada oo xitaa kugu keenaysa in aad ka shakido awooda Barcelona uga Gudbi karto wareegan marka loo eego qaab ciyaareedkeeda wakhtigii uu Ernesto Valverde hayay kooxda iyo waliba kooxda cusub ee Inter Milan ee uu dhisay tababare Antonio Conte iyo awooda kooxda Borussia Dortmund.
Group G: (Zenit Saint Petersburg, Benfica, Lyon, RB Leipzig): Group-kan ayaa ah midka kaliya ee aan odhan karno wuu isku dheeli tiran yahay waliba u furan yahay dhan walba iyo suurtagalnimo kasta.
Group H: (Chelsea, Ajax, Valencia, Lille): Group-kan ayuu sidoo kale isku dheelitirku joogaa iyada oo ay kooxaha Chelsea iyo Ajax adeegsan doonaan xiddigo da,yar ah oo cajiib ah iyaga oo ka hor tagi doona kooxaha Valencia iyo Lille.
Previous articleBarcelona Oo Ugu Dambayn Ka Jawaabtay Wararka Sheegaya In Ay Barcelona & PSG Ka Heshiiyeen Saxiixa Neymar
Next articleRASMI: Isku Aadka UEFA Europa League Oo La Soo Saaray & Kooxaha Waaweyn Oo Ogaaday Group-yadooda
AFAR Sabab Oo Ay Real Madrid Uga Laabatay Rabtiaanka Saxiixa Neymar